Nzira Yakanakisisa Yokufamba Kubva kuAmsterdam Kuenda Berlin Nechitima | Save A Train
musha > Travel Europe > Nzira Yakanakisisa Yokufamba Kubva kuAmsterdam Kuenda Berlin Nechitima
Kufamba uchibva kuAmsterdam uchienda Berlin nechitima kunopa vafambi chiitiko chisakanganwika uye yakasarudzika Eco-hushamwari sarudzo. kunyange zvazvo rwendo-awa matanhatu ndiyo zvishoma nonoka, nenyaradzo inopiwa zvitima uye runako rwendo runoshamisa. ne nzvimbo dzokuona dzakanaka munzira, uye yokudyira motokari kubatsira rasai nguva, rwendo anoguma ava nokukurumidza zvikuru kudarika kutarisirwa. Onai zvinotaurwa nezvitima mu Europe rinopa iyi nzira.
Kusvika panguva yazvino Hauptbahnhof (HbF) paunofamba kubva kuAmsterdam uchienda Berlin kana Berlin kuenda kuAmsterdam nechitima, zvakaoma haana kuwana chaizvo nezvavaidzidza rwendo rakamirira. The chiteshi ane simbi chivako pamwe pamapuriro vanoverengeka, apo nezvitima kuyambuka musoro wako kubudikidza yakaturikwa njanji. Zvinonyatsozivikanwa chaizvo zvakanaka zvakabatana navamwe guta kuburikidza Metro mitsetse uye bhazi chiteshi, pakati Berlin. Kana hamuna wakawandirwa pokugara muBerlin, chakanaka Ipfungwa kweminiti kubva pachiteshi ndiye InterCity Hotel.
Berlin KuAmsterdam Na Chitima
Paunobva kuAmsterdam uchienda Berlin nechitima, Pamunopinda yakakurumbira Central Station muAmsterdam, chimwe chezvinhu zviratidzo zvivako guta, uyewo airport Schipol. nyore, ari Central Station yakavakwa 1889, uye nhasi anogamuchira pamusoro 250,000 vakatakurwa pazuva. The chiteshi iri kwazvo signposted. Kana usingataure Dutch, ingo rangarira kuti izita repuratifomu iri “njanji”. Kana zvakakodzera, unogona vataure zvimwe Chirungu, kubva tsvimbo pachiteshi anotaura mutauro. muAmsterdam, wakanaka kusarudza pekugara pedyo Central Station ndiye Ibis Style. There, nzvimbo yakakwana nokuti chiteshi zvakarurama pakati, pedyo nzvimbo mubereko.
Amsterdam kuenda Berlin chitima tikiti
Basa rechitima reAmsterdam kuenda Berlin nechitima rinowanzoitika, uye pane anenge maviri nezvitima paawa. Most zuva nezvitima kubayira hwomutambarakede chaizvo basa, asi zvishoma nonoka, sezvo ivo kurega mumaguta akawanda munzira. The chitima wokutanga kubva Amsterdam kuna Berlin paunobuda pa 6:58 ndiri, Vasvika guru German pa 13:20. Kubva Berlin kuna Amsterdam, wokutanga chitima paunobuda pa 06:37 uye anosvika 13:08. The yakanakisisa Chikamu rwendo masikati, pasina mubvunzo, ndiyo nharaunda. Maguta Small mu richienda Germany uye Netherlands, uyewo makomo uye kumaruwa nharaunda, ndiwo emavambo mukare!
Amsterdam kuenda kuBrussels tikiti rechitima
Amsterdam kuenda kuLondon tiketi yechitima
Amsterdam kuenda kuParis chitima tikiti
The zvigaro nzira chitima kubva Amsterdam kuna Berlin vari siyana. neeSultan izvi kubva kwakajairika zvigaro kune cabins mhepo-vakaumbwa kuti vane Reclining zvigaro uye kunyange exchange kune pamibhedha. Sezvo rwendo ari refu, rwendo rumwe cabins izvi, iyo inopa Extras akadai chiedza, tembiricha kuzvidzora uye plugs nokuda Laptops uye maserura, izvo zvinoita kuti tikwanise mafirimu ichinyaradzwa kabhini yenyu panguva rwendo rwose. Yeuka kuti vatenge matikiti dzako dzinenge mbiri vhiki pachine saka iwe nechokwadi hapana dambudziko zvinoitika.
Tinonzwisa chokwadi chokuti uchava rumbidza kubva Amsterdam vatasvi kuna Berlin, ndiEzekieri. Ehe, pachava mumwe rwendo nokuda kamwe ukaedza izvozvo nguva yokutanga, iwe nguva dzose kuda kutora chitima zvakare uye zvakazara nakidzwa.
saka, wagadzirira chitima kufamba pakati peNetherlands neGerman nechitima? kana zvakadaro bhuka matikiti ako echitima nesu mukati 3 maminitsi, panguva yakachipa pashiri rates kutorerwa obnoxious Réservation yechikoro!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/amsterdam-berlin-train/- (Mupumburu pasi kuona Embed Code)